HALKAAN KA AKHRISO W.W WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER 8-FEB-2020
Saturday February 08, 2020 - 09:51:09 in Wararka by Mogadishu Times
Wasiirka Amniga Jubbaland Cab dirashid Janan oo meel fagaare ah lagu arkay Wasiirka Amniga DGJ Md.C/rashiid Janan oo ay DFS waaran lagu soo xirayo u jartay ay aa Dorraad lagu arkay duleedka M/Beledxaawo oo ku taal xadka kala qeybiya Soomaali
Wasiirka Amniga Jubbaland Cab dirashid Janan oo meel fagaare ah lagu arkay Wasiirka Amniga DGJ Md.C/rashiid Janan oo ay DFS waaran lagu soo xirayo u jartay ay aa Dorraad lagu arkay duleedka M/Beledxaawo oo ku taal xadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweyne ku xigeenka Jubaland Md.Maxamuud Sayid iyo Wasiirka Amniga Ca bdirashiid Janan ayaa duleedka M/Beled Xa awo waxa ay kula hadleen ciidamo ka tirsan D/G/Jubbaland. Mas'uuliyiintan ayaa kala hadlay ciidamada sidii ay u difaaci lahaayeen deegaanada hoos taga Jubbaland oo maalmihii la soo dhaafay ci idamo laga daadgureeyay M/Muqdisho la gey nayay. Sawir Rada Cabdirashiid Janan ayaa noqo naya kuwii ugu horeeyay ee saxaafada ay he shay tan iyo markii uu ka baxsaday dhowaan gacanta dowlada federalka. Ciidamadan mila tariga ee laga qaaday M/Muqdisho ayaa wax aa ay ku kala sugan yihiin qaar ka mid ah deg mooyinka G/Gedo sida Baardheere,Doolow iyo Luuq.
British American Tobacco (Brands) Limited, a British company of Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdo
Sigaarka; tobaakada, ceyriinka ama wax soo saarka; duub sigaarkaaga; tubaakada tuubada; waxyaabaha tubaakada laga sameeyo; Beddelka tubaakada (maaha ujeedooyin caafimaad); sigaarka; sigaar caliillos; qiijiyeyaasha sigaarka; qiijiyeyaasha sigaarka; isbarbar dhiga; qoraalada sigaarka; warqad sigaar ah; tuubooyinka sigaarka; Miirayaasha sigaarka; Qalabka jeebka loogu talo galay sigaarka duuban; mashiinnada gacanta lagu hayo ee lagu duro cirbadaha tuubbooyinka; sigaarka elektiroonigga ah; cabitaannada sigaarka elektiroonigga ah; tubaakada waxyaabaha loogu talagalay kuleylka.
OGEYSIISKA WAXAA SIDO KALE BIXINAYA in talaabo sharci ah laga qaadi doono shaqsi kasta ama shirkad isticmaasha sumadda ganacsiga ee lagu sheegay ama ku dayasho mudan ama si kale ku xadgudbay xuquuqda shirkadda la sheegay.
TA5220295 / 5872774.
Dowladda oo shaacisey sababaha Ciida ma da u geysay Gedo
Maalmihii la soo dhaafay waxaa DS ay Cii damo fara badan ku daabuleysay degmooyin ka tirsan G/Gedo, waxaana arrintaasi ka dha shay hadal-heyn badan oo ku saabsan sabab aha xilligaan halkaasi Ciidam ada loo geeyey.
W/Wasaaradda Warfaafin ta X/F/Soomaal iya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa she egay in Ciidamadaas ay yihiin Millateri,isla mar kaana dowladda ay si sharci ah Gobolkaasi u geysay.
Waxaa uu sheegay in ciidam adaas ay yih iin kuwo u taagan difaaca dalka,sidoo kalena ay Dowladda Ciidamo ay geyn doonto dham maan Gobollada dalka,hayeeshee uusan ka bi xin fa ah faahin intaasi ka dheer.
Maamulka Jubbaland oo uu G/Gedo ka mid yahay deegaannada Maamulkaas ayaa sheegay in DFS ay ku soo duushay,isla mark aana ay iska difaaci doonaan.
DFS oo faah faahisey sababaha loo soo daa bici la’yahay lacag Cusub
Wasiirka W/W/X/F/Soomaaliya Md.Maxam ed Cabdi Xayir Maareeye ayaa faah faahin ka bixiyey sababaha dowladda u soo daabici la’ dahay lacag Cusub oo uu horey u sheegay in la sameynayo Wasiirka Maaliyadda Soomaal iya. Wasiir Maareeye waxaa uu sheegay in do wladda ay la xiriirtey Hay’addo awood u leh in ay sameeyaan,hayeeshee ay jiraan duruufo fa ra badan oo sahli karin in lacag la soo daab aco.
Waxaa uu ku eedeeyey inay soo daabicida lacagta Cusub ee Shillinka Soomaaliga ay caqabad ku yihiin Maamul goboleedyada. "Ru ntii duruufdo fara badan ayaa jira,sababtoo ah dorraad waxaan maqlayey Maamul goboleed yiri guddiga doorashooyinka hanaga baxaan, namrka waxaa laag yaabaa inay lacagta aan soo daabacno ay diidaan ayuu yiri”Wasiir Maa reeye.
Madaxweyne Deni oo eedeyn u jeediyay do wladda dhexe kuna dhawaaqay Shirweyne
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid C/hi Deni oo Shalay shir jaraa’id ku qabtay Boosaaso ayaa eedeyn u jeediyay Madaxwey naha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo.
Waxaa sheegay in dowladda dhexe ee Soo maaliya ay hareer martay Hanaankii lagu he shiiyay, islamarkaana loo baahan yahay dhism aha dowlad Soomaaliyeed. Md Saciid Deni ayaa iclaamiyay shir wadatashi oo 15 bi sha soo socota Maar so lagu qabanayo M/ Ga rowe, kaa soo loo ga hadlayo xaalada sii xumaaneysa ee Puntland iyo Federa alka, isagoo u yeeray Xub naha Pun tland ku matala 2da Aqal ee Baarlam aanka FS iyo Siyaasiyiinta.
”Waxbadan ayaa madaxda DF la hadalnay si howsha taagan loo dhammaayo balse aam uskayaga ayaa waxaa loo qaatay inaan waxa soconaya raali ka ahaano ” ayuu yiri Deni .
Dad u geeriyooday Hilibka Neef xanuunsan oo ay cuneen
3 Qof ayaa ku geeriyootay Miyiga M/Luuq, hal ka 120 kalena lala tacaalayo xaaladdooda caa fimaad, markii ay Saacadihii lasoo dhaafay ku sumoobeen Neef Geel ahaa oo ay Hibilkiisa cuneen.
Dadka geeriyooday ayaa isugu jiray Laba Carruur ah iyo Haweeneey, iyadoo Bukaanka kalena lagu dabiibayo Isbitaalka guud ee Mag aalada Luuq. Dr; Cabdi Aadan Maxamed, Aga asimaha Isbitaalka Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ayaa warbaahinta Dowladda u sheegay in ay Gaadiidka gurmadka deg-degga ah u dir een markii ay qeyladhaanta u timid, sida ugu dhaqsiyaha badanna ay ugu jawaabeen baahi dii taagnayd, waloow uu si aad ah ugu cawday Dawo yaraan.
Agaasimaha ayaa sheegay in Neefka ka hor inta aan la qalin uu ahaa mid xanuunsan, lana siiyay Dawo, lagana yaabo in ay qabatay Dadkii isticmaalay Hilibka.
”Neefka ay gowracdeen waa uu xanuunsanaa waxaana la siiyay Dawo inta aan la gowracin kadibna Dadkii cunay badi waa uu saameeyay, waxaa dhintay sadax ruux oo Laba Carruur tahay, 120 Qof oo kalana waa ay la xanuunsa nayaan sida aan warbixinta ku helnay”, ayuu yiri Dr;Cabdi Aadan.
Qaar ka mid ah Odayaasha degaanka ay aa sidoo kale sheegay in dhacdadani ay ugub ku tahay, dhaqaaatiirtana ay u sheegeen in Dadka ay ku sumoobeen Hilibka ay cuneen.
Ciidamada Puntland oo howlgal qorshey san fuliyey
Ciidamada Ammaanka D/G/Puntland gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u ta baraan ee loo yaqaano PSF-ta ayaa waxaa ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaannada Buur aleyda ah ee Gobolka Sanaag.
Saraakiisha hoggaamineysa howlgalka a yaa waxaa ay sheegeen in howlgalkooda uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayey,isla mar ka ana ay ka fuliyeen buuraleyda degaanada Cee laayo iyo Warbad ee Buuraha Cal Madow ee G/Sanaag. "Ciidanka Amniga Puntland (PSF) waxay ka sameeyeen hawlgal amniga lagu xo ojinayo buuraleyda degaanada Ceelaayo iyo Warbad ee Buuraha Cal Madow, si shacabka degaanadaasi u helaa n jawi nabdoon oo ay ku noolaadaan ayaa la gu yiri”War kasoo bax ey Taliska Ciidamada PSF-ta Puntland.
Saraakiisha holwgalka hoggaamineysa ma sheegin wax hub ama dad ah oo ay howlgalka as kusoo qabteen,hayeeshee ay sheegeen in uu ahaa mid lagu baadi goobayey Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab & Kooxda Daacish.
Hir-Shabeelle oo Mareykanka & QM kala hadashay Arrimaha fatahaadaha
Wasiirka Arrimaha Gudaha DG/Hir-Shab eelle Maxamed Cali Caadle oo maalmahaan ku sugan M/Muqdisho ayaa waxaa uu kulan la qaatey Wakiilka QM ee Soomaaliya Amb, Jam es Swan. Kulanka ayaa 2da mas’uul waxaa ay uga wada hadleen daa dejinta golaha deegaanka Hir-Shabeelle,wax ka qabashada arimaha barakacayaasha, Fat ahaadaha iyo qodobo kale oo muhiim u ah Maamulka Hir-Shabeelle.
Dhinaca kale Wasiir Caadle ayaa Xarunta ugu weyn Hay’adaha Un-ka ee Xalane waxaa uu kula kulmay Safiirka Mareykanka ee Sooom aaliya amb, Donland Yamamoto ,iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya amb, Donland Yamamoto ayaa sheegay in ay Ma amulka Hir-Shabeelle ka caawin doonan ka ho rtaga arrimaha fatahaadaha oo dhibaato fabad an ku haayo deegaannada Hir-Shabeelle.
Md.Caadle ayaa safiirka waxaa uu u ga mahad celiyey sida ay u garab taagan yihiin Shacabka Soomaaliyeed,isaga oo ugu baaqay iay taageeradaas kordhiyaan.
Puntland oo Deeqaha lagu helo magaca Soomaaliya daba galeysa
Shirka G/X/ Puntland ee Dorraad oo Kha miis ah Puntland uu Shir-guddoomiyey Ma dax weynaha Puntland Md.De ni, waxaa 7aadkan looga ha dlay Amniga, Safarkii Madax we ynaha ee dalka Kenya, De eqaha lagu helo ma gaca Soo maaliya iyo aragtida Puntl and.
Sidoo kale waxa Golaha looga hadlay Xaal adda Gobolada iyo degmooyinka Puntland (Hi ndisaha Horumarinta Degmooyinka aan ku jirin Mashruuca JPLG-ga) iyo soo jeedinta guddi qii meeya lacagaha lagu qaado magaca Dowlada.
W/W/finta Puntland Cali Xasan Axmed (Sab areey) ayaa markii Shirkaasi soo dhammaaday faahfaahin ka bixiyay qodobadii looga hadlay Shirka ayaa sheegay in Puntland ay sameyn doonto baaritaano ku aadan Deeqaha Caala mka. Waxaa uu sheegay in Puntland aysan aq bali doonin in deeqaha lagu bixiyo Magaca Somaliyeed meelo gaar ah la marsiiyo.
Galmudug oo ka hadashay dagaal beeleed yada Gobolka Mudug
Taliyaha qeybta Booliiska Fadaraalka Gob alka Mudug,G/sare Maxamed Nuur Cali Ga daar, ayaa faah-faahin ka bixiyay xaaladda am ni iyo halka ay marayaan dedaallo ku aaddan xallinta xiisado colaadeed oo kasoo cusbo onaaday Gobolka, G/sare Maxamed Nuur Cali oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa she egay in ay meel wanaagsan marayaan dedaal lo fara badan oo ay ku bixiyeen qaboojinta dag aalladii halkaasi ka dhacay iyo sidii looga kala dab qaadi lahaa Beelaha ay xurguftu dhex martay.
Taliyaha ayaa Bulshada reer Mudug ugu baaqay in ay Booliska iyo laamaha ammaanka kala shaqeeyaan amniga iyo nabad gelyada Gobolka, isagoo usoo jeediyay in ay joojiyaan waxyaabaha xiisadda kicin kara. Hadalka ka soo baxay Taliska qeybta Boliiska Gobalka Mu dug ayaa imanaya xilli ay Maalmihii u danbee yay dilal ku saleysan aanooyin Qabiil ka dhac ayeen degaanno ka tirsan G/Mudug ink astoo ay jiraan dedaallo lagu xakamaynayo waxyaab aha dhaliya Gacan ka hadalka.
Gaadiid farabadan oo ku xayiran Isgoys ka Ex-Koontorool Afgooye
Gaadiidkaan oo ah nooca kuwa Xamuulka qaado ah ayaa waxaa ay muddo Afar Cisho ah ku xayiran yihiin Is goyska Ex-Koontr ool Afgooye ee Mu qdisho. Qaar ka mid ah wadayaa sha Gaadiidkaas ayaa waxaa ay sheegeen in markii hore loo og olaa inay xilliyada habeenkii ay ka gudbaan Isg oyska Ex-Koontorool Afgooye ee Muqdi sho,hayeeshee gebi ahaanba laga joojiyey.
Waxaa ay sheegeen in ay bixiyeen Canshu urtii laga doonayey,balse tan iyo markii uu dhacay qarixii Ex-Koontorool Afgooye 28-kii Bishii December ee sanadki tegay ee 2019 uu soo wajahay culeys la xiriira maritaanka wadad aas.
Gaadiidkaan ku xayiran Isgoyska Ex-Koonto rool Afgooye ee Muqdisho ayaa badeecado ka la duwan u sida qaar kamid ah Gobolada dal ka Soomaaliya,hayeeshee loo diidey inay Isgo yska ka gudbaan,waxaana wararka qaar ee la helayo ay sheegayaan in Dorraad ay wadaan banaanbax,isla markaana Gaadiidka waaweyn ay wataan ay wadada ku xireen.
Madaxweynaha Galmudug oo markale ku celiyey wada-hadal
Madaxweynaha D/G/G Md.Axmed Cabdi Ka ariye (Qoor Qoor) ayaa sheegay in maa mulkiisa uu qaadan do ono talooyinka ay u soo jeediyaan dadka waxga lka ah ee Galmudug.
Waxaa uu sheegay in Maam ulkiisa uu diyaar u yahay in sida dadka Reer Galmudug ay isugu duuban yihiin ay isu gu doonaan dadka tabashada qaba una baah an yahay in garab la siiyo. In kastoo tiro dhowr jeer ah uu ku cel celi yey Madaxweynaha Galmudug in uu wada-had al la furayo dadka kasoo horjeeda Maamulkiisa ayaa tan iyo markii la doortey uusan la kulmin dhinacyada ugu weyn ee kasoo horjeeda,sida hoggaanka Ahlusunna oo ay ku wada sugan yi hiin Dhuusamareeb & Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan Gaalkacyo.
Waa kuma Qasim al-Raymi? Hogaamiya ha Al-Qaacida ee la dilay
Kooxdan uu hogaaminayay Qasim al-Ray mi ayaa la asaasay sanadkii 2009-kii, waxaana ujeedkoodu ugu weyn ay ku sheegeen sidii ay uga hortagi lahaayeen dowladda uu Mareykan ka taageero iyo danaha dalalka reer galbeed ee gobolka.
Wararka ku sa absan in Mar eykanka uu dil ay hog aamiya ha Al Qaacida ee Yemen ayaa soo shaac baxay dhammaad kii bishii Janaayo, haseyeeshee kooxda oo ka jawaab celineysay ayaa labadii bishan febaraa yo soo duubtay codka Qasim al-Raymi oo she egaya in kooxda AQAP ay ka dambeysay toog ashadii ka dhacday xarnuntii miltaraiga Marey kanka ee floridda.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Qasim al-Raymi, oo kooxdaas hogaaminay ay tan iyo sanadkii 2015-ka lagu dilay hawlgal uu Mareykanka ka fuliyay gudaha dalka Yem en balse ma aysan sheegin waqtiga la dilay.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dhi mashada hogaamiyahaasi kadib, danaha Mar eykanka ee gobolka uu badqabo. Ururka ayaa saameyn badan ku lahaa dalka Yemen, waxa ana uu ka faa'iideystay xasilooni darrida ka taa gan dalkaas, taas oo saameysay dalal badan.
Al-Raymi waxa uu dhashay 5-tii bishii June 1978 waxa uuna ku dhashay gobolka Raymah oou dhaw magaala madaxda dalkaasi ee Sanca.
Qasim al-Raymi Waxaa uu xilka hogaamin ta kooxda kala wareegay ninkii isaga ka hor eeyay ee ay Mareykanka sido kale ku dileen duqeyn dhanka cirka ah.
Raymi waxa uu tabare ciidan ka ahaa xero ay al-Qaeda ku lahayd Afghanistan kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii 1990s. Waxa uu sannadkii 2004-tii usoo wareegay dalka Ye men halkaas oo uu ku xirnaa muddo shan sa nnadood ah isagoo loo haystay inuu ku lug lahaa shan safaaradood oo la weeray kuwaasi oo ku kala yaalay dunida daafeheeda.
Ka dib markii uu sannadkii 2006-dii ka baxsa day xabsigii uu ku xirnaa, al-Raymi ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dam beysay aasaasidii al-Qaeda -da Yemen oo uu mar Mareykanka ku tilmaamay iney tahay Al-Qaaciddada ugu saameynta badan marka laga soo tago Pakistan and Afghanistan.
Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay weerarro dhawr ah oo ka dha cay gudaha dalka Yemen iyo Sacuudi Carab iya kuwaasi oo ay ku naf-waayeen boqolaal qof.
Shiinaha: Carro iyo murugo ka dhalatay markii uu geeriyooday dhaqtarkii dadweyna ha uga digay
Li Wenliang, oo ah dhakhtar caafimaad isla markaana ka mid ahaa 8dii qof ee ugu horreey ay ee dadweynaha uga diga cudurka coronavi rus-ka, ayaa u dhintay Caawa fiidkii cudurkaas, taasoo dhalisay carro wadareed iyo murugo laga arkay warbaahinta bulshada ee Shiinaha.
Waxaa loo heystaa inuu yahay geesi qaran, Dr Li waxaa xirtay booliska Wuhan markii uu faa fiyay xanta cudurkaan horaantii bishii hore.
Wuxuu uga digay ardayda ay isku fasalka yihiin, isagoo u diray fariin khaas ah oo uu ma riyay barta WeChat' farriintaas oo macnah eedu ahaa fayras ku faafaya Wuhan.
Li Wenliang, wuxuu ahaa qofkii ugu horee yay ee cudurka lala xidhiidhiyay, ka dib markii uu daweeyay bukaan wakhtigaas aan ka warq abin in waxa uu qabay uu ahaa fayraska dil aaga ah.
Warka geeridiisa ayaa yimid 9:30 pm wa qtiga maxalliga ah maalintii Khamiista dorraad, kadib markii saaxiibkiis Dr Li uu sheegay inuu ku dhintay qaybta daryeelka degdegga ah.
Global Times, oo ah warbaahinta dawladda Shiinaha ee afka-Ingiriisiga ku hadasha, ayaa markii ugu horreysay ka warbixisay sheekada geerida Li Wenliang.
Dhimashadiisa ayaa si dhakhso ah u noq otay mawduuca ugu hadal heynta badan bara ha WeChat iyo Weibo, oo ah labada shabaka dood ee warbaahinta bulshada ugu weyn Shiinaha. Iyadoo laga jawaabayo geerida dha khtarka, hay'adda la dagaallanka musuqmaas uqa ee Shiinaha, guddiga kormeerka qaran, ay aa jimcaha Dorraad ah shaaciyay inay koox u dirayaan Huway si ay u sameeyaan baaritaan buuxa.
Dhimashada Dr Li ayaa sii kicisay quluubta dadka Shiinaha oo welwel xoogan ka qabay cudurkaan oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen u gu yaraan 636 qof isla markaana uu ku dhacay 31,161 kale. Goor hore Arbacadii, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu sheegay in tirada kiisaska cusub ee la xaqiij iyay ee loo yaqaan 'coronavirus' ay hoos u dha cday markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka dillaacay. Dawladda Shiinaha, gaar ah aan hoggaanka maxalliga ah, ayaa dadweyna ha kala kulmay dhalleecayn ballaaran oo ku aaddan sida aywax uga qabteen cudurka dillaa cay.
Weerarada Soomaalida loogu geysto Koon fur Afrika oo kordhay
Kooxaha Burcadda K/Afrikanka ah ayaa wa xaa ay sanadihii ugu dambeeyey kordhiyeen weerarada joogtada ah oo ay ku hayaan dadka Ajaanibta ah gaar ahaan Soomaalida Ganacsi ahaan u tagtay dalkaas.
Sanadkii tegay ee 2019 ayaa waxaa Mag aalo oyinka kala duwan ee dalka Koonfur Afrika dil al,dhaawac, iyo boob hantiyadeed loogu ge ystay Soom aali farab adan,kuwa as oo qaa rkood dal kaasi ay ka soo carar een.
Sanadkaan 2020 ayaa sidoo kale waxaa si ca adi ah u socda dilalka iyo Boobka lagu haa yo Soomaalida ku Ganacsata dalka Koonfur Afrika,waxaana la dilay tiro dhalinyaro ah halka kuwo kale la dhaawacay lana boobey hantido oda.
xalay fiidkii rag hubeysan ayaa Goobtiisa Ganacsiga waxaa ay ku weerareen Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu Magacaabo dhagay Xeyle,taas oo ku taalla Magaalada Polokwane Ee Dalka Koonfur Afrika.
Kooxaha Burcada ah ayaa muwaadinka Soomaaliyeed ay u geysteen dhaawac culus oo sababey in Isbitaal loola cararo,waxaana si doo kale lagu soo waramayaa in lacago far abadan oo goobtiisa Ganacsi u yaallay inay qaateen.
Majiraan Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladaha Koonfur Afrika iyo Soomaaliya oo ka hadlaya dhibaatada lagu haayo Soomaalida,iyada oo Dowladda Soomaaliya ay dhawaan safiir Cu sub u magacaawday dalkaas.
Soomaaliya iyo Rwanda oo isku furaya Albaabada ganacsiga
Dowladaha Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala sax iixday heshiis la isu furayo hawada 2da dal si loo sahlo ganacsiga 2da dal, iyo si doo kale isku socodka bulshada.
Maxamed Cabdulaahi Salad Wasiirka gaadi idka iyo duulista hawada oo ku sugan dalka Rwanda ayaa heshiiskan la kala saxiixday dhi giisa dalka Rwanda, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka faaideysan doon to horumarka ka jira dalka Rwanda.
"Aad ayaan idinkugu hanweynahay adinkoo da gaalo sokeeye iyo xasuuq ka soo kabatay haa tana heer wanaagsan aad gaarteen ,wax aan rajeynayaa in arrintan ay noqon doonto tal laaba dii ugu horeysay ee dhinaca ganacsiga labada dal ay hore u qaadeen,”ayuu yiri Wasiir Salad.
"Waxaan hubaa in dhowaan aad arki doonta an ganacsato badan oo Soomaali ah kuwaa soo ku qulqulaya dalkiina si ay u maalgashta an,adinkana waxaan idinka rajeyneynaa in gan acsatadiina ay Soomaaliya yimaada an,”a yuu sii raaciyay Wasiirka gaadiidka Soo maal iya. Wasiirka Kaabayaasha dalka Rwanda Ga tete ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay kii bo qolaad oo ay dalal caalamka ka tirsan la saxi ixatay dowlada Rwanda, uuna rajeynayo in albaabo ganacsi oo cusub u furo labada dal.
Madaxweyne Deni oo Magacaabis Sameeyay
Madaxweynaha Puntland Md. Siciid C/ Deni ayaa Xeer Madaxweyne Lr.15 February 6, 2020, ugu magacaabay Guddoomiye iyo Guddoomiye ku-xigeen Ku meel gaar ah Degmadda Galdogob.
Markuu arkay: Baahida loo qabo horumarinta Degmadda Goldogob.
Markuu arkay: Aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo.
Markuu garowsaday: In ay dhamaatay mudo xileedkii Golaha Degaanka Degmadda Gald ogob, walina aysan suurto galin in la dhiso gole Deegaan oo cusub.
Markuu tixgaliyay: Talo soo jeedinta Wasaar adda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimu quraadiyeynta Dowladda Puntland.
1. Waxaa Cabdiqaadir Khaliif Xaashi si ku meel gaar ah loogu magacaabay Guddoomi yaha Degmadda Galdogob.
2. Waxaa Siciid Muuse Shire si ku meel gaar ah loogu magacaabay Guddoomiye ku-xigeen ka Degmadda Galdogob.
Xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa markuu Mad axweynuhu saxiixo, wuuna saxiixay.
Wasiir Janan oo Sharaxaad ka bixiyay qaab kii uu uga baxsaday goobtii lagu hayay
Wasiirka Amniga maamulka Jubbaland Cab dirashiid Xasan Nuur Janan ayaa markii ugu horreysay Faahfaahin ka bixiyay qaabkii uu kaga baxsaday magaalada Muqdisho oo uu dowladda Soomaaliya ugu xirnaa Muddo Shan Bilood ah.
Wasiirka oo la hadlay BBC ayaa sheegay in aan la geyn xabsi laakiin lagu haay ay Xaafado ka mid ah Mag aalada Muqdisho oo marba Xaafad la geyn jiray.
"Sida uu horayba sarkaal ka tirsan cii damada asluubta Soomaaliya bulshada ugu ca ddeeyay, aniga xabsi la ima geynin. Markii gar oonka diyaaradaha la iga qabtay, waxaa i qa btay niman boolis ah oo labisan iyo niman dha rcad ah oo isla socda, mid ka mid ah dharcad ka ayaana amrayay ciidanka”, ayuu yiri. Janan
"Aniga iyo niman askar ah oo dhowr iyo to ban ah ayaa isla joognay xaafado ay dad sha cab ah u dhisteen si gaar ah, halkaas ayaana la igu hayay. Runtii askarta gacanta igu heys ay wax xumaan ah oo ka baxsan amarrada la siinayay oo ay ii geysteen ma jirin, laakiin wax aa jirtay xumaan farabadan oo amarro askart aas lasoo siiyay ah oo ay ku khasbanaayeen inay fuliyaan”.
Janan aya ka hadlay qaabkii loola dha qmay intii gacanta lagu hayay.
"Aniga iyo niman askar ah oo dhowr iyo tob an ah ayaa isla joognay xaafado ay dad sha cab ah u dhisteen si gaar ah, halkaas ayaana la igu hayay. Runtii askarta gacanta igu he ysay wax xumaan ah oo ka baxsan amarrada la siinayay oo ay ii geysteen ma jirin, laakiin waxaa jirtay xumaan farabadan oo amarro ask artaas lasoo siiyay ah oo ay ku khasban aayeen inay fuliyaan”.
Mar la weydiiyay su’aasha ku saabsan inuu ka warramo qaabkii uu ku baxsaday, Cab dirashiid wuu qoslay, wuxuuna ka bixiyay sharraxaad:
"Way jirtaa inaysan cidna i sii deynin, howl aan aniga isku xirxiray oo uu Rabbi ii fudud eeyay ayaan kusoo baxsaday”, ayuu yiri.
Isagoo sii faahfaahinaya ayuu yiri: "Markii aan ogaaday inaan la i sii deyn doonin ilaa wax kasta oo ay dowladda federaalka rabto ay ka sameysato Jubbaland, waxaan go’aan saday inaan qorsheeyo sidii aan uga bixi lahaa gurigii la igu hayay, kaddibna shan boqol oo kiiloo mitir ayaan soo maray badda”.
"Markii aan baxay kaddib saddex ma almood iyo saddex habeen ayaan joogay Muq disho. Waxaana ii suurtagashay inaan xilli maa linnimo ah soo raacay doon. Doonta waxaa ii waday niman Soomaaliyeed oo iyaga iska leh, cidna ima soo raacin oo kaligey baan ahaa”, ayuu yiri. Xigasho:jowhar.com
Xaaf oo ku gacanseyray Warqad kasoo baxday Safiirka Mareykanka
War-saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Galmudug garabka Gaalkacyo Axmed Ducaalle Gelle Xaaf ayaa loogu jawaa